Ny Tolona an-tononkalo | Hevitra MPANOHARIANA |
Ny Tolona an-tononkalo
2010-01-31 @ 16:14 in Kolontsaina
Tsy dia maro ny tononkalon'ny tolona ary mampieritreritra aza indraindray hoe tankina hatreo angaha ny aingam-panahin'ny mpanoratra Malagasy no tsy dia ahitana tononkalo na hira fitolomana ankoatra ny "Iny Lalana Iny" izao toe-draharaha misy eto Madagasikara izao? Koa hanentsenana ny banga dia hanolotra manokana ireo tononkalo notsimponiko teny ho eny aho:
Ny sainao nikotrika
Ny tananao namotika
Sy harena sesehena
Ny vavanao nibaiko
Ny tongotrao nijaiko
handrava izay nijoro
Moa tsy handatsa havana
No hadika sotasota
Moa tsy heloka sy ota
Mpandroba efa vonona
Lazaina fa mpitolona
Ka ny voina an-tsitra-po
No natao mahery fo
Fa ianao dia ianao indrindra
No nanainga tongotra namindra
nitso-drano hoe: mandehana!
Tanteraho ny fanimbana
Rakotobenja Léonard Efraïma
Tsy ianao no olona ory ry miaritra ny ngidiny
Tsy ianao mihitsy akory no lazaina ho faraidiny
Tsy ianao manao ny marina nefa indrisy fa sahirana
Na ianao izay te hiarina fa tsy manana hamikirana.
Tsy ianao manjoni-dava f'efa reraky ny tolona,
Na ianao mikombom-bava nony injay enjehin'olona.
Tsy ianao izay matin-kitsaka nefa tsy afaka mamaly
Tsy ianao mamitsapitsaka, matim-bono sy mijaly.
Fa ny farafahoriana dia ny manam-pahefana
Izay mampiasa habibiana fa ambonin'ny lalàna,
Satria senton'ny mpitolona no mozika fitsinjahany,
Ary ranomason'olona nomba hiram-pivavahany.
Ireo no farafahoriana tsy mahita fiadanana.
Ireo no ndeha hitomaniana f'efa maty am-pitsanganana.
Maty fa tsy vazivazy, vatana mijoro sisa,
Ka inoana fa tsy ho azy izany atao hoe paradisa.
Toa tsinjoko misokatra ny lanitra, mitsiky indray ny ampitso
Tsy ho resinao ny marina, Andriamanitra tsy ho diso
Ny fahanginanay izay mino, tsy midika ho faharesena
Fa izahay na tsy miteny, miaina tokim-pamonjena
Araho anie ity tantara, tena nisy sy niainana sanatria tsy anganongano
Very ny asa fivelomana, fafy lainga, fandrahonana,maso be manganohano
Tsy zonao ny miteny, na hoe hilaza hevitra, sa ianao te ho voasambotra ?
Migadragadra fahatany, tsy afaka hiantso fahamarinana na koa mba hisarangotra
Miandrandra fahafahana sy tokim-piadanana isika malagasy,
Ka somary very hevitra sy toa niraviravy tanana ary koa nangasihasy
Fandrobana, fandravana,herisetra,mahatahotra ary tena tsy mitsitsy
Ireo no rivotra nafafy izay nataon-dralilison, ry Sarla, ny FIS
Nangina koa ny fiangonana, F'angaha tsy misy fahavononana?
Maromaro tsy hay tononina, no kivy ketraka sy tsy nahita fiononana,
Ary tsoriko etoana fa toa tsy nanana hery akory hamonjena fiangonana,
Toa resy ê, ka hany hery dia miandry eto ny fotoana izay higadonany
Ka hafaliana anie ny anay, nisentosento ravoravo fa toa misokatra ny lanitra
Raha vao nahare sy nilazana, fa isan-kasabotsy dia hofenoina Antsahamanitra
Hiaraka hanandra-bavaka, hiara-hihira fiderana, hiantso indray ilay Ray tsy To
Hijery ireto malagasy, trotraky ny tsy rariny ka miandrandra Indra Fo
Izaho mino, isika mino fa ny tanan'Andriamanitra dia mamikitra tsy manadino
Tan-Tsorony matanjaka, tsy hita maso, tsy mba raraka no nomeny antsika mino
Ka na basy marovava, miaramila sy forongony, no miatrana hanandevo vonona hamono
Andriamanitra no Niaro sy Niambina ny isan-tokony,tena tsapa tsy honohono
Ka andeha re ry Antananarivo, tsy resy ianao, fa mifohaza ary aza mety lao
Raiso ny baibolinao, ahondreho ny lohanao, antsoy ny Tompo izao dia zao,
Manokana ianao fotoana, isan'andro isan'ora, ka asandratonao ny Hanitra
Ankasitrahan'ilay Tompo,mandra-piandry ny sabotsy ho feno indray Antsahamanitra%
Tranainy, Afrika 20 janvier 2010 à 09H16
'Zahay dia tsy maintsy mamaky bantsilana
ireo izay tsy mety ka mila hotenenina.
Tsy tantinay mantsy raha toa mitongilana
Irony vilany kanefa tsy harenina.
'Zahay tsy hipetraka intsony ho mpitazana
Ny olona adala efa manary lamba.
Ho anay tena masina ny tanindrazana,
Tsy ampitantanina olona jamba.
'Zahay tsy hijanona intsony ho mpijery
Na hoe mpitehaka fotsiny ihany
F'ilay Gasikara tsy foinay ho very,
Tsy tianay hiverina ho zanatany.
'Zahay tsy hijanona intsony ho mpifatotra;
Alanay ny tady nangeja ny lasy.
Ny anay ny safidy, safidy efa matotra:
"Tsy mila mpanjanaka ny Malagasy".
MBA HO IRAY...
Mba ho iray no tarigetra
Sady vavaky ny mpino;
Saingy ny tsy marin-toetra
Dia mikimpy, manadino
Sy maneso ireo mivonona
Hampiray sy hampihavana;
Nefa mbola sahy mitonona,
Ho mpitory ny fitiavana.
Izany ve no hoe mpivavaka
Tena mendrika hoekena?
Sao mpamarina any an-davaka
Sy mpambotry firenena?
Mitomany anao ny lanitra
Ry minia mialangalana;
Ianao izay miantso an'Andriamanitra
Nefa dia mivily lalana.
Mitomany anao satria
Ny Mpaminany tena mendrika,
Sahy mijoro, miara-dia
Fa tsy mba miafinafin'endrika.
Tsy maintsy misy zavatra mankarary fo
ety an-tany ety
Tsy maintsy misy ady mahavalaka ny loha
sy tena mankahia
Ao ny velam-pandrika, ao ny sotasota
hanakana ny dia
Ao ny fivadihana sy ny velina kanota
ataon'ireo tsy tia.
F'izao, izay mino sy matoky
Handresy sy ho voasoratra amin'ny bokin'
ny fiainana doria.
Rakotomalala Rivoniaina Rija
Rehefa anaovana herisetra ny olona ry fiangonana,
Na enjehina isan'andro sy iharam-pandrahonana;
Aminay ny toy izany dia porofo iray mazava
F'Andriamanitra mihitsy no efa notampenam-bava.
Rehefa aiditra am-ponja sady anaovana antsonjay
Ny namana mpanao gazety manapotsitra ny vay;
Aminay ny toy izany dia maneho sy manambara:
Didy jadona no iainana eto Madagasikara
Rehefa ampiharina isan'andro ny karazana amboletra:
Ka ny manam-pahefana lasa rain'ny herisetra;
Aminay ny toy izany dia midika tsotr'izao
F'ianao mitonona ho mpitondra no efa "tsisy kalitao"
Rehefa hita miharihary f'efa lo ny fitondrana,
Fa ny olona tsy marina no arovan'ny lalàna;
Aminay ny toy izany fitondrana tsy azo ekena:
Mila arodana avy hatrany fa manimba firenena.
Sedera Ravalison (13 janoary 2010)
Marihina fa ireo rehetra ireo dia nalaina tao amin'ny gazety Tia Tanindrazana nivoaka nandritra ity volana janoary 2010 hivalona ity avokoa. Raha te-hametraka hevitra na hanohy ny aingam-panahin'ireo mpanoratra ireo ianao dia tsarovy ny mametraka izay soratanao amina vakiraoka (brouillon) aloha; avy eo dia ankotrihinao ny takelaka (actualiser) dia apetrakao amin'ny toerana fametrahana azy ny lahatsoratrao ary feboinao avokoa izay tokony fenoina dia mirary aho fa tsy ho tratran'ilay filazana hoe tsy mahazo alalana hametraka hevitra iny ianao.
jentilisa, alahady 31 janoary 2010 amin'ny 18:18